एक नम्बरका स्वार्थी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, आफ्नो भलोका लागि जे पनि हुन्छन् गर्न तयार – Sandesh Press
एक नम्बरका स्वार्थी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, आफ्नो भलोका लागि जे पनि हुन्छन् गर्न तयार
July 1, 2021 450
स्वार्थ, लोभ मानवमा हुनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। अरुलाई प्राथमिकतामा राख्दा आफ्नो प्रगति नहुने भएकै कारण मानिसहरु स्वार्थी हुन्छन्। तर केहि व्यक्तिहरु भने आफूलाई भन्दा अरुलाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाउँछन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक राशिको आफ्नो-आफ्नै व्यवहार र स्वभाव हुन्छ। यसै आधारमा रहेर पनि राशि अनुसार स्वार्थीपन छुट्याउन सकिने ज्योतिषीहरु बताउँछन्। कुन राशिले आफूलाई कति प्रतिशत प्राथमिकतामा दिन्छ त ? हेर्नुहोस्
मेष: व्यवहारले मेष राशि हुने व्यक्तिहरु अरुको भन्दा आफ्नो फाइदाको पक्षमा ध्यान दिन्छन्। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यिनीहरु लगभग ७० प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन्।
स्वभावले दयालु भएता पनि फाइदा हुने अवस्थामा यिनीहरु आफैलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। तर अरुको प्रगतिमा भने कहिले पनि इर्ष्या नगर्ने मेष राशिको स्वभाव हुन्छ।
वृष : वृष राशि हुनेहरु आफ्नो लागि मात्र नभई अरुको लागि पनि सोच्छन्। यिनीहरु लगभग ४५ प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन्। आफूलाई घाटामा राखेर पनि कहिले काहीं वृष राशि हुनेहरु अरुलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
मिथुन : अरुलाई मद्दत गर्ने स्वभावका भएर पनि मिथुन राशिहुनेहरु अरुलाई भन्दा बढी आफूलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। यिनीहरु भित्र लगभग ६० प्रतिशत स्वार्थ लुकेको हुन्छ।
कर्कट : स्थिति अनुसार कर्कट राशि हुनेहरु आफूलाई प्राथमिकतामा राख्ने की अरुलाई भन्ने बारे निर्णय गर्छन्। यिनीहरु लगभग ५० प्रतिशत मात्रै स्वार्थी हुन्छन्। आवश्यकता परेको खण्डमा कर्कट राशि हुनेहरु घाटामा पनि चित्त बुझाउँछन्।
सिंह : स्वभावले अलि रिसाहा भएता पनि सिंह राशि हुनेहरु आफूलाई भन्दा बढी अरुलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। यिनीहरु लगभग ४० प्रतिशत मात्र स्वार्थी हुन्छन्। अरुको मन जित्न सिंह राशि हुनेहरु आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरेर अरुको फाइदामा पनि योगदान दिन्छन्।
कन्या : ज्यादै मिलनसार र विनम्र स्वभावका हुन्छन् ,कन्या राशि हुनेहरु। यिनीहरु आफूलाई भन्दा बढी अरुलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। भावुक स्वभावका हुनाले पनि कन्या राशिहुनेहरु कम स्वार्थी हुन्छन्। लगभग ३० प्रतिशत मात्रै कन्या राशि हुनेहरु भित्र स्वार्थ लुकेको हुन्छ।
तुला : अरुलाई सहयोग गर्ने भएर पनि कहिले काहीं तुला राशि हुनेहरु आफूलाई अलि धेरैनै प्राथमिकता दिन्छन्। लगभग यिनीहरु ५५ प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन्। आवश्यकता परेको खण्डमा तुला राशि हुनेहरु आफ्नो फाइदा नहेरी योगदान गर्न पनि पछि पर्दैनन्।
वृश्चिक : यस राशि हुनेहरु आफूलाई धेरै नै प्राथमिकतामा राख्छन्। आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने हुँदा वृश्चिक राशि हुनेहरु भित्र ८० प्रतिशत स्वार्थ लुकेको हुन्छ।
थोरै प्रतिशत मात्र यिनीहरु अरुको बारेमा सोच्छन्। आफ्नो सुखमा ध्यान दिने भएता पनि वृश्चिक राशि हुनेहरु कहिले काहीं अरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्छन्।
धनु : धनु राशि हुनेहरु शान्त स्वभावका हुन्छन्। आफूलाई भन्दा अरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने यिनको स्वभाव हुन्छ। लगभग ३५ प्रतिशत मात्रै यिनीहरु स्वार्थी हुन्छन्। अरुको पनि खुशीको बारेमा सोच्ने हुँदा धनु राशि हुनेहरु आफूलाई घाटा हुनेभएता पनि स्वार्थ त्याग्छन्।
मकर : जसरी होस् आफ्नो प्रगति छिटो होस् भन्ने मकर राशि हुनेहरुको सोचाइ हुन्छन्। स्वभावले महत्वकांशी भएको कारणले पनि यस राशि हुनेहरु आफूलाई अलि बढी नै प्राथमिकतामा राख्छन्। यिनीहरु लगभग ७५ प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन्।
कुम्भ : स्वार्थको मामलामा कुम्भ राशि हुनेहरु अलि धेरै नै अस्थिर हुन्छन्। यिनीहरु कहिले धेरै स्वार्थी भन्छन् भने कहिले कम। लगभग ४० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा यिनीहरु स्वार्थी हुन्छन्। कुम्भ राशि हुनेहरु कुन अवस्थामा आफूलाई प्राथमिकतामा राख्छन् र कुना अवस्थामा अरुलाई भन्ने ठेगान नै हुँदैन।
मीन : स्वभावले सहयोगी, मिलनसार भएर पनि मीन राशि हुनेहरु आफूलाई प्राथमिकतामा राख्न रुचाउँछन्। आफ्नो प्रगति बारे यिनीहरु स्पष्ट हुन्छन् जसकारण मीन राशि हुनेहरु हद भन्दा बढी स्वार्थी हुन्छन्।
मीन राशि हुनेहरु ९० प्रतिशत स्वार्थी हुन्छन्। तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मीन राशि हुनेहरु अरुलाई प्रयोग भने कहिले पनि गर्दैनन्।
Prevमेलम्चीका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने अभियानमा जुटिन् वर्षा !
Nextआज बढ्यो सुनको भाउ ? हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार
तीन वर्ष पनि चलेन अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विवाह, के भन्छिन् आमा मधु ?
एकै परिवारका ६ जनाको ह,त्या आरोपी लोकबहादुर कार्की सार्बजनिक !
यिनै हुन् नेपालमा पहिलो पटक महिला गभर्नर हुने निलम ढुंगाना तिम्सिना !
२० बर्षे नर्स करुणाको दुनियाँलाई रु वा उने सन्देश, दिन मिल्ने भएँ आफुले र्फेने थोरै सास पनि दिन मन लाग्थो (भिडियो हेर्नुस्)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10479)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10262)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (6271)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (6210)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (5927)
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3515)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (3231)
दुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित) (2467)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (2389)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (2189)
१२ लाख पैसासहित आफ्नै धर्मभाइसँग सिन्दुर हालेर श्रीमती बे’पत्ता,श्रीमान रुँ’दै(भिडियो हेर्नुस)
साउदीमा १८ महिनादेखि व्यथाले भूइँमै छटपटाइरहेका यी नेपाली युवककको दर्दनाक दृश्य (भिडियो सहित)
वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा एकैदिन ९ जना संक्रमितको मृत्यु !
नेपालमा दुबै डोज खोप लगाएका पुरूषको संक्रमणबाट मृत्यु